IWindows Noticias iyiwebhusayithi ye-AB Internet. Kule webhusayithi sinakekela ukuthi sabelane ngazo zonke izindaba ezimayelana neWindows, okokufundisa okuphelele futhi sihlaziye imikhiqizo ebaluleke kakhulu kule ngxenye yemakethe.
Kusukela yethulwa ngo-2008, iWindows News isibe ngelinye lamakhasi e-web ayisithenjwa emkhakheni wohlelo lokusebenza lwe-Microsoft.
Ithimba lokuhlela leWindows News lakhiwa iqembu le- Ochwepheshe bezobuchwepheshe beMicrosoft. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Bengilokhu ngisebenzisa iWindows kusukela ngama-90s, lapho i-PC yami yokuqala ifika ezandleni zami. Kusukela lapho bengilokhu ngingumsebenzisi oqotho wazo zonke izinhlobo uMicrosoft azethule emakethe yeWindows.
Kusukela ngisemncane bengihlala ngisebenzisa iWindows, ngokomuntu siqu nangokomsebenzi. Bengikuthanda kakhulu amakhompyutha empilweni yami kangangoba kusukela ngisemusha ngathatha izifundo ze-inthanethi futhi ngiye ngaba umthengi ovamile wephephabhuku elisemthethweni le-Windows. Njengamanje ngihlala nginolwazi mayelana nentuthuko yakamuva yalolu hlelo lokusebenza oluthembeke kangaka kithi phakathi neminyaka edlule.
IWindows iwunqobile umhlaba we-Informatica futhi yize befuna ukuwukhipha esihlalweni, kuseyisilinganiso. Bengilokhu ngisebenzisa iWindows kusukela ngo-1995 futhi ngiyayithanda. Futhi: ukuzijwayeza kwenza kuphelele.
Nginentshisekelo ngakho konke okuhlobene nobuchwepheshe kusukela kukhompuyutha yami yokuqala. Njengamanje, ngiphethe ukuphathwa kwezinsizakalo ze-IT, amanethiwekhi kanye nezinhlelo, futhi uma kukhona okungashintshile kusukela ekuqaleni kwami, yiWindows. Ngiphinde ngiphathe enye ingosi eku-inthanethi njenge-iPad Experto. Lapha ungabona konke ebengikufunda eminyakeni edlule ehlobene nesistimu yokusebenza ye-Microsoft.
Umdlandla weWindows, umhloli wezinto ezintsha ezinikezwa inguqulo entsha ngayinye. Empilweni yami yansuku zonke, iyithuluzi elibalulekile, engingasebenza noma ngilijabulele.
Yonke impilo yami isondele kwiWindows kusukela ngama-95, 98, XP no-7, futhi manje ngikujabulela lokho Windows 10 lokho kwathembisa okuningi ekuqaleni kwayo futhi lokho akudumazanga. Kunikezelwe kwezobuciko, lapho iWindows yenza khona ukusebenza kwami ​​kwansuku zonke kube lula kakhulu. Ukubhala ngokusebenza kwayo kuyinto engiyithokozelayo nami.
Umthandi wesoftware futhi ikakhulukazi iWindows, ngicabanga ukuthi ukwabelana ngokuqukethwe nolwazi kufanele kube ilungelo, hhayi inketho. Ngalesi sizathu, ngiyathanda ukwabelana ngakho konke engikufundayo ngalolu hlelo lokusebenza.